मूल्य समायोजन भइसकेपछि लाभांश दर परिवर्तन गर्न मिल्छ ? कि नीतिमै समस्या हो ?
काठमाडौं : सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुका लागि बुक क्लोज र मूल्य समायोजन सम्बन्धी वर्तमान विधि नै बेलाबेला टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण बजार सञ्चालक नेप्से समेत बेलाबखत अप्ठेरोमा पर्ने गरेको छ । विशेषगरी बुक क्लोज मितिमा मूल्य समायोजन भइसकेपछि कम्पनीले लाभांश दर परिर्वतन गरिदिँदा लगानीकर्ताले हैरानी खेप्नु परेको हो । विगत लामो समयदेखि यस्ता समस्याहरु दोहोरिँदै आइरहेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्सलाई लिन सकिन्छ ।
यस फाइनान्सको बुक क्लोज भइसकेपछि बोनस दर संशोधन भएको छ । साधारण सभा र लाभांश प्रयोजनका लागि यसले पुस १९ गरेको बुक क्लोज गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रस्तावित ७% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भयो । तर, कम्पनीको पुस २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बोनस दर कम गरी गत वर्षको नाफाबाट ६% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३१% नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्यो ।
नियामकको राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लाभांश दर संशोधन गर्नुपरेको कम्पनीको भनाई छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कर सम्बन्धी व्यवस्थामा फेरवदल हुने अवस्थाले स्वीकृत वित्तीय विवरणमा पनि सारभूत असर पर्ने भन्दै लाभांश परिमार्जन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसरी बुक क्लोज भएर मूल्य समायोजन भइसकेपछि लाभांश दर परिवर्तन भएको छ ।
जसका कारण लगानीकर्ताहरु थप अन्योलमा परेका छन् । यस बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा नेप्सेमा पनि अहिले छलफल भइरहेको नेप्से स्रोतले बताएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘कम्पनीले लाभांश संशोधन नगर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्छु भनेको छ । उताबाट आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्र के गर्ने भनेर टुंगो लाग्नेछ ।’
तथापि, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको जस्तै यो घटना नयाँ भने होइन । योभन्दा १० वर्ष अगाडि मुक्तिनाथ विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा २५% नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो । जसका लागि २०६८ मंसिर १६ गते बुक क्लोज गरेर पुस १ गते साधारण सभा बोलाइएको थियो ।
तर, त्यसको एक सातापछि केन्द्रीय बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकको २०६७ साल भदौ र असोजमा पुँजी कोष नपुगेको कारण लभांश नै रद्द गराएको थियो । अहिले जस्तै नगदमा पनि मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था भएको भए उक्त घटनाले पनि ठूलै समस्या निम्त्याउने थियो होला । तर नगद भएकाले खास समस्या परेन । तर विषय र अप्ठेरो पक्ष त एउटै हो ।
के अहिलेको मूल्य समायोजन विधि नै गलत हो त ?
यो १० वर्षको बीचमा अरु कम्पनीमा पनि यस्ता घटना नभएका होइनन् । तर, अहिलेसम्म यसमा नीतिगत परिर्वतन गरिएको छैन । यही बेला प्रस्तावित बोनस तथा नगद लाभांश साधारण सभाबाट पारित हुनु भन्दा अघि नै बजार भाउ समायोजन गरिनु कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । प्रस्ताव गरिएका हरेक लाभांश साधारण सभाबाट पारित नै हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।
कतिपय कम्पनीको साधारण सभाले प्रस्तावित लाभांश पारित नगरेको उदाहरण पनि छन् । जस्तो यसअघि एकपटक नबिल बैंकमा पनि यस्तो समस्या आएको थियो । प्रस्तावित लाभांश पारित नभएमा बुक क्लोज मितिपछि समायोजित भाउलाई आधार मानेर भएका कारोबारलाई के गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ । यो व्यवहारिकका साथै कानुनी समस्या पनि हो । यता, सेयर बजारका जानकारहरुले भने विगत लामो समयदेखि बुक क्लोज नीति नै गलत भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका विज्ञ ज्योति दाहाल अहिलेको बुक क्लोजसम्बन्धी विधि नै गलत रहेको बताउँछन् । ‘साधारण सभाबाट लाभांश पारित भएपछि मात्रै लाभांशका लागि बुक क्लोज गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन् । साधारण सभालाई लाभांश प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने अधिकार पनि भएकाले सभा अघि नै बोनस सेयरको बुक क्लोज हुनु नहुने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘अहिलेको गलत नीतिका कारण लगानीकर्ताले बेलाबेलामा समस्या खेप्नुपरेको छ ।’ यस्तै, अन्य कतिपय लगानीकर्ताले साधारण सभाबाट लाभांश पारित भएपछि मात्र भाउ समायोजन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, नेप्से भने तत्काल नीति नै परिवर्तनको तयारीमा नरहेको स्रोतले बताएको छ ।